Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Ahụike Na-enweghị Ahụhụ nke World Tourism Network malitere
Nkwughari mkparịta ụka njem site na World Tourism Network (WTB) malitere na Machị 2020 ma na-eme ihe omume ya n'ọkwa ọhụrụ taa na ịmalite Health na-enweghị ala. Njem nleta agaghị alọta ruo mgbe mmadụ niile nwere nchekwa.
The World Tourism Network (WTN) malitere atụmatụ ya Health na-enweghị ala | Santé sans Frontiers
Ọ dịghị onye ga-adị mma rue mgbe mmadụ niile ga-adị mma. Njem nleta, njem azụmahịa, na ụlọ ọrụ MICE agaghị alaghachi ruo mgbe onye ọ bụla nwere nchekwa.
Igodo nke ịmaliteghachi njem nlegharị anya bụ ohere ịgba ọgwụ mgbochi nye onye ọ bụla nọ na ụwa jikọrọ ọnụ.
Fọdụ nwere ike ịsị na okwu COVID-19 bụ naanị okwu maka ndị isi ahụike, ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ na ndị si mba ọzọ. eTurboNews bu ụzọ kwuo banyere nkesa ọgwụ mgbochi ahụ ahaghị iche.
World Tourism Network kwenyere na njem njem ụwa na njem nleta kwesịrị ịbụ akụkụ dị ukwuu nke mkparịta ụka ahụ. COVID-19 na-emetụta ụlọ ọrụ njem dịka mpaghara ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na enweghị ụzọ isi ewepụ njem site na ọrịa na-efe efe ugbu a ma ọ bụ nke ọdịnihu, na njem bụ maka ịkpọkọta ndị mmadụ, WTN ghọtara mkpa njem njem ụwa na njem iji bụrụ akụkụ jikọtara nke mkpebi na usoro amụma na a nzaghachi nye COVID-19 dị ugbu a ma enwere ọrịa ga-enwe n'ọdịnihu.
Ndi ochichi nke ala na ndi nuru Nobel ghotara nke a na uwa jikotara aka. ọ dịghị onye ga-adị mma ruo mgbe onye ọ bụla ga-anọ n’udo.
N'ụwa nke oge a, ụlọ ọrụ ndị njem na ndị njem na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọhụụ a. Ọ bụ n'ihi nke a WTN mba oru ngo, "Ahụike na-enweghị oke / Santé sans Frontiers," na-achọ mkpuchi mkpuchi ọgwụ mgbochi ụwa niile maka mmadụ niile gburugburu ụwa.
WTN kwekọrọ na echiche ụlọ ọrụ "njem na njem" na-akwado nkwado mba ụwa na mba na mpaghara enweghị ike ịnweta ọgwụ mgbochi zuru oke.
Ndi WTN, ndi nochitere anya umu obere ulo oru pere mpe na gburugburu uwa ghotara na ndi a bu ulo oru mbu nke tara ahuhu n’oge oria ojoo na njeghari njem.
WTN na-ekwe nkwa ọ bụghị naanị ịbawanye nkwado n'etiti mba site na iso ndị nwere oke nkụkọ na-arụkọ ọrụ, mana ọ na-achọkwa ịkwalite njem mba ụwa nke ndị njem nleta site na ịkọwa ihe mgbochi njem na-egbochi mmadụ na ịkwalite nghọta na mmekorita.
WTN na-esetị aka ya ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na atumatu na njem na njem njem mana ndị NGO, ndị ọkachamara ahụike, ndị isi gọọmentị, na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Ebumnuche "Health without Border" nke WTN na-achọ ụwa nke nwere nkwado zuru ụwa ọnụ, si otú a na-enye ndị mmadụ ohere maka ụwa nchekwa na ahụike nke ga-egosipụta ikike mmadụ nwere ime njem.
Otu uzo iji ruo ebumnuche a bụ ịgba ọgwụ mgbochi ụwa nke mere na -emepụta ọgụ zuru ụwa ọnụ.
WTN na-agba mmadụ niile ume ka ha sonye na ya ka ọ na-achọ ụwa karịa mmadụ na ụwa nke ụlọ ọrụ ndị njem njem zuru ụwa ọnụ nwere ike inyere onye ọ bụla nọ n'ụwa aka ịhụ okooko osisi mbụ nke ahụ ike na ọganihu.
WTN ga-akpọ ndị ozi nke njem na ndị isi nke ndị ọrụ njegharị na mbubreyo n’ọnwa a ka ha zute ka ha sonye na mkparịta ụka a dị mkpa. N'ime awa 24 gara aga, ndị ozi si mba iri ekwenyelarị isonye.
Onye ọ bụla nwere mmasị n’isiokwu a nwere ohere isonye.
WTN dị njikere ị listena ntị ma nabata ndị ọkachamara na ndị ọchụnta ego.
WTN dị njikere iti mkpu ma ọ dị mkpa.
WTN dị njikere ịkwado gọọmentị, nzukọ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ mmadụ ọ bụla nwere ike inye aka ma nye onyinye.
WTN abụghị nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
“COVID-19 na njem na-ejikọ ma azụmahịa onye ọ bụla. Ime ọfụma na nkwukọrịta iji rụọ ọrụ a, ”Juergen Steinmetz, onye nchoputa na onye isi oche nke WTN na-ekwu.
Pịa na Ahụike Na-enweghị Oke Otu Mmasị maka ozi ndị ọzọ.
Soro Network Tourism Network ka ị nwee ike bụrụ akụkụ nke otu mmasị a site na mbido.
gaa www.wtn.travel/register ịghọ onye otu wee lelee "Health Without Borders" dị ka otu nwere mmasị.
Gị www.wtn.travel na www.re-ewu.ru maka ozi ndị ọzọ.